सिलाई मिसिन सुईको मुख्य कार्य उपकरण हो। उपकरणहरू सावधानीपूर्वक आवश्यक छान्नुहोस् छान्नुहोस् ताकि यसमा सबै आवश्यक प्रकार्यहरू छन्। यन्त्र सञ्चालनमा सहज हुनुपर्छ। लामो समयसम्म सेवा गर्न मेशिनलाई, यो नियमित रूपमा यसको रखरखाव गर्न आवश्यक छ: सफाई, स्नेहन, समायोजन। यी प्रक्रियाहरूको लागि धन्यबाद, मशीनरीको उच्च गुणस्तरको कार्य निश्चित छ।
सिलाई मेशिन स्नेहन कसरी जान्न आवश्यक छ, यसले यसले उपकरणको अपरेसनको स्तरलाई असर गर्छ। प्रक्रिया पछि, सबै भागहरू अझ सजिलै कार्य गर्दछ। स्नेहन मेनेजमेसनको मद्दतले तीव्र पहनाबाट सुरक्षित राख्छ। तेलको साथ मिसिन प्रसोधन गर्दा शोर घटाउँछ।
मलाई स्नेहक चाहिन्छ?
सिलाई मिसिन एक जटिल यन्त्र हो, किनकी धेरै तन्त्रहरू सिलाईसँग कुराकानी गर्छन्। यदि एक लामो समयको लागि सफाई र स्नेहन को लागी नहीं गरिन्छ, तब सृजनकारी, शोर, धागे को तोडने प्रकट हुन्छ। स्नेहनको लागि आवश्यक छ:
लामो सेवा जीवन;
गुणस्तर स्टिचहरूको प्रदर्शन;
कम शोरको काम;
पुरानो मिसिनहरु को स्नेहन प्रत्येक तीन महिना को लागी गरिन्छ, र नयाँ को लागि एक प्रक्रिया छह महिना मा पर्याप्त हुनेछ - यो सबै काम को तीव्रता मा निर्भर गर्दछ। यदि उपकरण निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने, तेल आवश्यक छ जब यो ध्यान दिइनेछ।
कामको लागि के चाहिन्छ?
सिलाई मेशिन कसरी स्नेहन गर्ने? कार्यवाही अगाडि बढ्नु अघि, तपाईंले काम गर्ने सबै चीजहरू तयार गर्नुपर्छ। तपाईंलाई चाहिन्छ:
इन्जिन तेल। यो हार्डवेयर स्टोरमा बेचेको छ। धेरै धन को 100 जी हुनेछ।
मेडिकल साइरिङ। यो उपकरण काम गर्न सजिलो छ, किनकि यो पनि कठिन-पहुँच-सम्म पहुँच प्रक्रिया गर्न सम्भव हुनेछ।
एक ब्रश। यो धूल र फलामामेट हटाउन प्रयोग गरिन्छ।
स्क्रूड्रीवर। उपकरणले तपाइँलाई स्नेहन समयको लागि केही भागहरू अनलक गर्न अनुमति दिन्छ।
Napkin। अतिरिक्त तरल हटाउनु आवश्यक छ।
चलचित्र। यसले फलामलाई प्रदूषणबाट सुरक्षित गर्नेछ।
गुणस्तरको प्रदर्शनको लागि उपकरणहरूको यस्तो सेट आवश्यक छ।
स्नेहनको लागि तयारी
प्रत्येक सिलाई मेनु प्रक्रियाको लागि तयारी चाहिन्छ। यो धूल हटाउनु पछि तेलको साथ स्नेहन गर्नुहोस्, किनकि सिलाई को समयमा धेरै ढेर एकत्र गरिन्छ। उपकरण नियमित रूपमा साढे र सफा गर्नु पर्दछ। कपास कपडा र एक ब्रश प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
यो धनुलाई हटाउन र उपकरणको नली भागहरू, साथै प्लेटफार्म अन्तर्गत हटाउन आवश्यक छ। स्नेहक छेदबाट हटाउन सबै अनावश्यक। बाह्य पक्षलाई हाइड्रोस्कोपिक कपास ऊनको साथ पेट्रोलटम तेल र रक्सी संग उपचार गर्न सकिन्छ। यदि उपकरण प्रयोगमा छैन भने, यो आवरण वा हुडसँग ढाक्नु पर्छ। यी तयारी प्रक्रियाहरू थिए। अर्को, चल्ने तेलको साथ सिलाई मिसिन कसरी स्नेहन गर्ने भन्ने कुरा गरौं।
कुन तेल छान्नु हुन्छ?
तयारी पूरा भएपछि, यो उपकरण तेलको साथ प्रशोधन गर्न सुरु गर्न सम्भव छ। फ्ल्याप हटाउन सबै अनावश्यक। सिलाई मेशिन स्नेहन कुन प्रकारको तेल? यसको लागि, एक विशेष रंगीन तरल प्रयोग गरिन्छ। तर vaseline तेल गर्नेछ। प्रयोगको समयमा, उत्पादनलाई कपडा खराब पार्न हुँदैन।
वनस्पति तेल वा किशोरी प्रयोग नगर्नुहोस्। पहिलो एजेन्ट छिटो छिटो रोकिन्छ, जसले क्रिस्टहरूलाई खण्डमा बनाउँछ जसले भारी उपकरणहरूको कारण बनाउँछ। मेशिन असहज हुनु पर्छ, धोईएको, सफा गरियो, र यो प्रदर्शन गर्न सजिलो छैन। साथसाथै, मिट्टी के तेलले जंगली संरचनालाई बढावा दिन्छ र सफाईको जटिलता दिन्छ।
सिलाई मेशिन कसरी सुचारु गर्ने ताकि यति धेरै लामो समयसम्म पुग्नेछ? तेल प्रयोग गर्न आवश्यक छ, जुन भण्डारण गर्नु पर्छ ताकि तरल सफा छ। घर्षणको प्रत्येक क्षेत्रको लागि, दैनिक3बूँदहरू दैनिक थप्न सकिन्छ। यदि उपकरणले लामो समयको लागि काम गरेको छैन भने, पहिले तपाईलाई जाँच गर्न आवश्यक छ कि सफाई आवश्यक छ।
ड्राइभ तंत्र, यदि कुनै पनि प्रक्रिया गर्न निश्चित हुनुहोस्। यसको लागि, विशेष स्नेहन छेदहरू छन्। यदि ड्राइव खुट्टा छ भने, तपाईँले क्र्राकशाफ्ट व्हील, पेडल को अक्ष, र क्रान्कशाफ्टको साथ डर्बर र ड्र्याकको साथको जडानको क्षेत्रहरूको अन्तिम समर्थनलाई स्नेहन गर्न आवश्यक छ।
खुर्को र तुला फ्याक्टरीहरूको विद्युतीय उपकरणमा, स्नेहन क्षेत्रहरू रातो रंगमा चित्रित छन्। नली मा तंत्र को प्रोसेस गर्न को लागी, तपाईंलाई माथि को कवर को हटाना चाहिए। प्लेटफार्म अन्तर्गत भागहरूको मशीनिंगको लागि, एक तर्फबाट मेशिन राखिएको छ, र तल्लो तह खोलिएको छ। साथै उपकरणमा इन्जिन तेलको साथमा धातुको बक्से वा क्रन्ककेस हुन्छ, जुन हरेक वर्ष परिवर्तन हुनुपर्छ।
स्नेहक मिसिन जमिनोम
प्रत्येक उपकरणमा विशेष संरचना छ। यसैले, स्नेहनको सिद्धान्त फरक हुन सक्छ। उपकरणहरूको लामो समयसम्म प्रयोग को रोकथाम चाहिन्छ। तेल कम्तिमा मुख्य भागहरु प्रशोधन गरिनु पर्दछ। सिलाई मिसिन जेनोम कसरी स्नेहन गर्ने? तपाईंले निर्देशनहरू सावधानीपूर्वक पढ्न अनि कामका नियमहरू अनुसार रेखाचित्रलाई विचार गर्नुपर्छ। उपकरणमा तेल दाहिने दाँया कन्टेनरमा पहिले नै छ। पहिला तपाईंलाई प्लास्टिकको मामला हटाउन आवश्यक छ। यसको लागि, केवल स्क्रूहरू हटाउनुभयो। पहिले नै भित्र तपाई तेलको पातहरू देखाउनुहुन्छ र साथसाथै भागहरू रमाईन्छ।
भाइ मिसिनको स्नेहन
यो ब्रान्डको उपकरणसँग निर्देशनहरू छन्। भाइ सिलाई मेशिन कसरी सुचारु गर्ने? घर्षण संग धातु विधानहरुको प्रकृया आवश्यक छ। त्यहाँ उपचारको पर्याप्त 1 वा2बूँद हुनेछ। यो कम आवरण हटाउन विधानसभाहरू घुमाउन लागु हुन्छ।
तेल एक सिरिन्जमा एकत्र गर्नुपर्छ, र त्यसपछि सानो ड्रपहरूसँग लागू गरियो। यसले प्रविधिलाई शान्त र सजिलो पार्ने अनुमति दिन्छ। काम पछि, उपकरण एक नरम कपडा संग पकाउनु पर्छ। त्यसोभए थ्रेड र बबिन प्रयोग गर्नुहुने थिचो खुट्टाको साथ बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब थ्रेडहरू थ्रेड गरिएको छ, तपाईं अनावश्यक छायामा सिलाईको गुणस्तर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस मेसिनलाई थप सहज कार्यको लागि उपयुक्त हुनेछ।
मोल्ड के हो र यो के हो?
Sophistry - प्राचीन एक अद्वितीय दार्शनिक स्कूल
बर्नाउल भठ्ठी। विकास को इतिहास
कति निर्माण गरिएको छ इल-2 (1941 - 1945)
आफ्नै हात संग जीन्स मा एक प्वाल कसरी बनाउने? त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्!